Run with Map My Run 19.19.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 19.19.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Run with Map My Run
Run with Map My Run ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ရုံသင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးခရီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝါရင့်ပြေးသမားအပေါ်ထွက်စတင်ဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် hit မှလမ်းကြောင်းများနှင့်လှုံ့ဆော်အပေါ်နေဖို့လိုအပျတဲ့ features နဲ့ tools တွေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြေးပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးခံစားရစေရန်နည်းပြအကြံပေးချက်များကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ, ရယူပါ။ အားလုံးကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးရန်သင့် shared ကတိကဝတ် supporting သန်း 60 ကျော်အားကစားသမားများ၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမှုတ်သွင်းနေပါ။
- HOVR ™ Infinite ပြင်ပမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့် 2019 ၏အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်နိုင် Tech မှများထဲမှအမည်ရှိ
- ထိုနယူးယော့ Times သတင်းစာ, TechCrunch, က Wired နှင့် TIME အ Featured
- About.com အပေါ်အကောင်းဆုံးကို run App ကိုစာရှုသူများ '' ရွေးချယ်မှုမဲပေး
အက်ပ်များနှင့် wearable နှင့် ဆက်စပ်.
- Track သင့် Android Wear ကိရိယာမှတိုက်ရိုက်ပြေးနဲ့အမြင်အာရုံရ haptic နှင့် Real-time အတွက်အသံတိုးတက်မှု updates များကို။
- Connect ကိုအောက်မှာချပ်ဝတ်တန်ဆာတစ်ဦးပရီမီယံအတွေ့အကြုံ, သင့်ရဲ့ပြေးတိုးတက်လာဖို့ကပိုဒေတာနှင့်လမ်းကြောင်းခြေရာခံခြင်းများအတွက် app ကိုမှဖိနပ်ချိတ်ဆက်။
- Google ကြံ့ခိုင်မှု, Android Wear, Garmin, Fitbit, Jawbone နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ် Apps နဲ့အများဆုံးဝတ်စရာတွေနဲ့ Sync ကို။
- သင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်မီးလောင်မှာပြည့်စုံကြည့်ဘို့ MyFitnessPal ဖြင့်ချိတ်ဆက်အာဟာရ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူပါ။
သင့်လေ့ကျင့်ခန်း TRACK နှင့်မြေပုံ
- အရှိန်အဟုန်, အကွာအဝေးနှင့်မြင့်နှင့်တူစာရင်းဇယားများအတွက်စိတ်ကြိုက်အသံနှင့်, GPS,-ခြေရာခံပြေးအပေါ်ကို real-time အသံနည်းပြရယူပါ။
အပြေး, စက်ဘီးစီးခြင်း, လမ်းလျှောက်, အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်း, လက်ဝါးကပ်တိုင်လေ့ကျင့်ရေး, ယောဂ, နှင့်ပိုပြီး: - 600+ အပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများအကြီးဆုံးရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုများကျော် Log ။
- တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာကိုတင်သွင်းရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ 400+ devices များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
- ဂီယာ Tracker နှင့်သင်၏ဖိနပ် '' မိုင်အကွာအဝေးခြေရာခံ။ ကဒဏ်ရာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သစ်တစ်ခု pair တစုံဘို့အချိန်ရသောအခါအသိပေး Get ။
- အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းများ, run ဖို့အနီးအနားအရပ်တို့ကိုတွေ့ပါသင်အကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်းမှတပါးသစ်တွေ add နှင့်အခြားသူများနှင့်မျှဝေဖို့။
- မိတ်ဆွေများကသင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် Feed ပေါ်မှာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။ ရုံကြံ့ခိုင်ရေးသို့ရတဲ့သို့မဟုတ် win-ရှိရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ဖို့ရှိပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းရှိမရှိ။
- Facebook, Twitter နဲ့ Instagram ပေါ်လူမှုရေးနှင့်ရှယ်ယာလေ့ကျင့်ခန်းကိုရယူပါ။
- အခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်စိန်ခေါ်မှုများကို Join ဦးဆောင်သူကိုတက်နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုအနိုင်ရ။
MVP Premium အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ Pro လိုလေ့ကျင့်ရေး
- တစ်ဦးပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အောင်မြင်မှုများအစီအစဉ်များသို့သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုဖွင့်ဖို့အကောင်းဆုံး tools တွေကို Unlock ။
- အသုံးပြုမှုတိုက်ရိုက်ခြေရာကောက် Real-time running တည်နေရာမျှဝေချစ်ရသူစိတ်ငြိမ်သက်ပေးရ။
- သင်တန်းအစီအစဉ်များစီရင်လော့နှငျ့သငျတိုးတကျအောငျအဖြစ်သင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်သည် dynamically လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များနှင့်အတူကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်အကွာအဝေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့။
- Monitor & ရည်မှန်းချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့နှလုံးခုန်နှုန်းဇုန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
- သင့်ပြေးများအတွက်ရည်မှန်းချက် Set နှင့်အရှိန်အဟုန်, cadence, အကွာအဝေး, ကြာချိန်, ကယ်လိုရီ, နှင့်ပိုပြီးအပေါ်အသံနည်းပြနှင့်အတူလမ်းကြောင်းအပေါ်နေဖို့။
သင်တစ်ဦးပရီမီယံ MVP ကြေးပေးသွင်းဖို့ upgrade လြှငျ, ငွေပေးချေဝယ်ယူ၏အတည်ပြုချက်ကိုမှာသင့်ရဲ့ Google Play စအကောင့်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းတစ်နှစ်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 29,99, ဒါမှမဟုတ်တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,50 ကုန်ကျနေချိန်တွင်အဆိုပါလစဉ်ကြေးပေးသွင်းတစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5,99 ကုန်ကျသည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားမတိုင်မီလက်ရှိကာလ၏အဆုံးမှဖျက်သိမ်းမှာအနည်းဆုံး 24 နာရီမဟုတ်လျှင်အလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုးမည်။ သက်တမ်းတိုးသည့်အခါကုန်ကျစရိတ်မတိုးရှိပါသည်။
subscriptions စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး Auto-သက်တမ်းတိုးဝယ်ယူပြီးနောက် Store မှာ Play ကို Google တွင် 'subscriptions' အောက်က Account Settings ကိုအတွက်ပိတ်ထား။ ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့လက်ရှိကာလဖျက်သိမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျ MVP တစ်ဦးပရီမီယံကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်ပါကတစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းကာလမဆိုအသုံးမပြုတဲ့အဘို့ကိုဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
https://account.underarmour.com/privacy_and_terms မှာအပြည့်အဝအသုံးအနှုန်းများ, အခြေအနေများ, ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအရှာပါ။
မှတ်ချက်: နောက်ခံ running GPS စနစ်၏အဆက်အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။
MapMyRun ကြံ့ခိုင်ရေးချိတ်ဆက်ချပ်ဝတ်တန်ဆာလက်အောက်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေး & ကြံ့ခိုင်ရေးအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: MapMyFitness, UA မှတ်တမ်း, Endomondo, & MyFitnessPal ။ Apps ကပတစျခုမစ်ရှင်-ရန်သင့်အားပိုကောင်းစေနှင့်အတူကျန်းမာတက်ကြွလူနေမှုလုပ်ပိုင်ခွင့်မှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Run with Map My Run အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Run with Map My Run အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Run with Map My Run အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Run with Map My Run အား အခ်က္ျပပါ
a3fene စတိုး 26 16.44k
Run with Map My Run ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Run with Map My Run အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 19.19.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.mapmyrun.com/privacy_policy/
လက်မှတ် SHA1: 02:E1:2F:E1:AE:15:25:C8:AB:7E:92:96:63:A8:94:B8:F1:A4:F1:8B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): MapMyFitness
အဖွဲ့အစည်း (O): MapMyFitness
Run with Map My Run APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ